🥇 ▷ Moto E6 Plus waa mid rasmi ah oo leh laba laab gadaal kamarado iyo shaashad aan caadi aheyn ✅
Moto E6 Plus waa mid rasmi ah oo leh laba laab gadaal kamarado iyo shaashad aan caadi aheyn
Maalmo xanta ka dib maanta waxaan si rasmi ah ula kulannay, gudaha IFA ee lagu qabanayo magaalada Berlin, qaabkan cusub Moto E6 Plus taasi way la imaan doontaa laba kamarad gadaal ah iyo shaashad HD + leh oo aan la garanayn.
Runtu waxay tahay wararka xanta ah ee ku saabsan marin-habaabintan ee ku faafay shabakadda maalmihii la soo dhaafay ayaa la xaqiijiyay labadaba qaabkeeda iyo astaamaha ay ka kooban tahay.
Moto E6 Plus, warqad farsamo
Moto E6 Plus ee cusubi wuxuu leeyahay qeexitaankiisa gaarka ah ee taleefanka heerka laga soo galo ee baahida aadka u yar waxqabadka.
Shaashadda: 6.1 inji, HD + qaraar (1,560 x 720 pixels).
Kaydinta gudaha: 32/64 GB + microSD ilaa 512 GB.
Rear camera: 13 MP f / 2.0 + 2 MP Mashiinka qoto-dheerida.
Camera hore: 8 MP f / 2.0.
Isku xirnaanta: Dual SIM, Bluetooth 4.2, WIFi n iyo FM Radio.
Dekadaha iyo dareemayaasha Micro USB, faraha akhristaha.
Durbaan: 3,000 mAh (la qaadi karo).
La qabsiga moodada
Kaliya fiiri Moto E6 Plus waxaan rumeysan nahay farqiga ugu weyn ee qaabeynteeda marka loo eego kan ka horeeyey, oo aan ahayn midda aan ahayn ka mid noqoshada kuleylka kore ee shaashadda inuu guriga kaameeradda hore.
Guddidu waxay leedahay jaallad ah oo ah 6.1 inji leh HD + xalin iyo mid saamiga dhinaca 19.5: 9, iyadoo 80% hore loogaga dhigay shaashadda.
Wadnaha Moto E6 Plus waxaan haysannaa Helio P22 sideed-core at 2 GHz sida processor-ka, inaad awood u leedahay inaad kala doorato 2 ama 4 GB oo loogu talagalay RAM. Dhanka kaydinta gudaha ayaan sidoo kale rabnaa laba suurtagal oo leh 32 iyo 64 GB, lagu fidin karo labada xaaladoodba ilaa 512 GB iyadoo la adeegsanayo kaarka microSD.
Haddii aad fiiriso qaybta sawirrada ee xubnaha cusub ee qoyska Motorola, waxaan aragnaa a laba kamarad gadaal meel toosan la iskugu geynayo toosh iftiin leh (LED flash) si loo iftiimiyo sawirrada habeenkii.
Sawir gacmeedkani wuxuu leeyahay a 13 megapixel sensor ugu weyn leh aperture f / 2.0 iyo AF iyo kuwa kale 2 megapixel Second Mas’uulka ka ah akhriska qoto dheer ee sawirrada.
Sida loogu dareeraha hore kuu sheegaa waxay tahay 8 megapixel leh furitaanka f / 2.0.
Moto E6 Plus wuxuu leeyahay a durbaan, laga saari karo kiiskan, ka 3,000 mAh taasi waxay ku mahadsantahay dekeddeeda MicroUSB.
Intaa waxaa sii dheer, ma jiro wax maqan sawirka faraha ee dhabarka ee Terminalka, barkinta moobaylka iyo Labada shaqo ee SIM, in kasta oo aan haysanno maqnaanshaha NFC chip.
Moto E6 Plus waxaa lagu iibin doonaa ‘Polured Graphite, Bright Cherry, Cranberry right iyo midabada buluuga ah ee Caribbean-ka laga bilaabo Oktoobar iyadoo qiimayaashani yihiin:
Moto E6 Plus (2 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo ah ROM): 139 euro.
Moto E6 Plus (4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo ah ROM): 159 euro.
Cusub Moto E6 Plus waxa jiray ayaa maanta si rasmi ah loo soo bandhigay, waa soosaarka Motorola si ay isugu dayaan inay xukunka ugu xukumaan qayb u tartamaya sida soo galitaanka, oo iskudaya khiyaanada laba kamarad gadaal, shaashad leh mid aan fiicnayn iyo qiimo quruxsan oo cidhiidhi ah.